Covid 19 ကသွေးကြောရောဂါများလား • Zifam Myanmar
Home » Covid 19 ကသွေးကြောရောဂါများလား
Covid 19 ကသွေးကြောရောဂါများလား
Covid 19 ရောဂါဟာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှဝင်ရောက်ပြီး အဆုတ်ကိုအဓိကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါအဖြစ်လက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါပိုးဟာ အဆုတ်တစ်နေရာကိုတည်းကိုပဲတိုက်ခိုက်တတ်တာမဟုတ်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ACE2 receptor ရှိတဲ့နေရာများအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ACE2 receptor အများအပြားရှိတဲ့နှလုံးနှင့်သွေးကြောနံရံများကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Covid 19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေမှာ နှလုံးကြွက်သားများကိုထိခိုက်စေခြင်း၊ သွေးကြောများအတွင်းသွေးခဲစေခြင်းစတဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Covid ဖြစ်နေသူများနှင့် Covid နလန်ထလူနာများမှာ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကိုသက်သာစေဖို့ ကိုအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ၂၀၂၁၊မေလ ခုနှစ်ထုတ် Molecules ဂျာနယ်၏သုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဟာသွေးခဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အာနိသင် (anti-thrombotic effects) ရှိတဲ့အတွက် Covid 19 နောက်ဆက်တွဲ သွေးခဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့သေဆုံးမှုများကို အထိုက်အလျောက်လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း။
ဟာ Covid 19 ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းများ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်ပျက်စီးစေခြင်း၊ သွေးကြောနံရံများပျက်စီးစေခြင်း စတာတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဟာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်းကိုသက်သာစေခြင်း၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့အာနိသင်များရှိတယ်ဆိုတာ တိကျခိုင်မာတဲ့သုတေသနစာတမ်းများစွာရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့အစားအစာများ (စပျစ်သီး၊ ဘယ်ရီသီး၊ မြေပဲ စသည်ဖြင့်) စားသုံးပေးခြင်းနှင့် ပါဝင်သောဖြည့်စွက်အားဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းဟာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး Covid ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ယခုအစီအစဉ်ကို အပါအဝင်အခြား နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုစေတဲ့ Crataegus Monogyna၊ Magnesium၊ Biotin နှင့် Alpha Lipoic Acid တို့ပါပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့ မှကျန်းမာရေးဗဟုသုတအဖြစ်တင်ဆက်ပေးထားပါသည်။
Gligorijevi´c, N. et al., 2021. Role of Resveratrol in Prevention and Control of Cardiovascular Disorders and Cardiovascular Complications Related to COVID-19 Disease: Mode of Action and Approaches Explored to Increase Its Bioavailability. Molecules, Volume 26.
Siddiqi, H. . K., Libby, P. & Ridker, P. M., 2021. COVID-19 – A vascular disease. Trends in Cardiovascular Medicine.